Izindlela Ezi-7 Zokuthumela I-imeyili Yeselula Engaphumelelanga | Martech Zone
Izibalo zeReachMail zibonisa ukuthi ama-imeyili angaphezu kwama-40% avulwa kumadivayisi eselula. Ngibhekabheka ama-imeyili kudivayisi yami yeselula usuku lonke ukuze ngikwazi ukufinyelela kuma-imeyili abaluleke kakhulu. Ama-imeyili amaningi engiwasusayo angokokuthengisa ngokwemvelo futhi awafundeki ku-iPhone yami. Esikhundleni sokuzama ukusondeza noma ukushintshela kumodi yokwakheka komhlaba, ngivele ngiyisuse. Kodwa-ke, lapho ngifika ku-imeyili enamafonti amahle nokuhlelwa okuhlanzekile, ngivame ukuchitha isikhathi esithile ngiphenye kuwo.
I-ReachMail ikulethela i-Infographic yethu kulokho okufanele sikugweme emikhankasweni yeselula Izindlela Ezi-7 Zokuqalisa Umkhankaso We-imeyili Ongaphumelelanga.
Ukuziphatha sekuguqukile nge-imeyili ephathekayo nangesikhathi sayo lapho abathengisi be-imeyili befaka khona izindlela ezinhle kakhulu zokuqinisekisa ukuthi ama-imeyili abo ayafundeka, afanelekile, futhi ahlonishwa ababhalisile bawo. Akunandaba ukuthi kuncane kangakanani, kusengathi ngithola inkinobho yokuzikhipha ohlwini lwami kudivayisi yami ephathekayo lapho i-imeyili ingafinyeleli engikulindele.
Tags: ukwakheka kwe-imeyilii-imeyili ephathekayoukwakheka kwe-imeyili yeselulaukufinyelela
I-LucidPress: Ukubambisana Okuphrintiwe Kwe-Inthanethi Nokushicilela Kwedijithali
I-Oct 8, i-2013 ku-12: i-22 PM
Umdwebo omuhle nemininingwane ngoba ishaya zonke izindawo ezilungile! ngenkathi yethulwa ku- "negative" lena yenza umsebenzi omuhle impela wokuchaza othishanhloko abayisisekelo walokho okufanele ukwenze.